Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka socda deegaanno ka tirsan Gaalgaduud. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka socda deegaanno ka tirsan Gaalgaduud.
Howlgal ka dhan ah Al-Shabaab oo ka socda deegaanno ka tirsan Gaalgaduud.
Ciidanka xoogga dalka qeyb-27-aad ayaa howl-gal qorsheysan oo ka dhan ah maleeshiyaad Al-shabaab kawada deegaanno ku dhow Bulacle oo waqooyi Bari ka xiga magaalada dhuusamareeb halkaasi oo ay argagixisada ku dhibaateyn jireen shacabka.
Saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa inoo sheegay inuu yahay mid Qorshihiisa hore la diyaarinayay lana sii wadi doono inta Argagixisada Al-Shabaab laga ciribtirayo deegaannada ay kaga sugan yihiin ama ay si dhuumaaleysi ah kun jogaan ee ka tirsan Galmudug.
Deegaannada Jihada Bari ka xiga magaalada Dhusamareb ayaa Maleeshiyaadka Al-Shabaab Shacabka ku dhibaataynayeen muddooyinkii la soo dhaafay balse Ciidamada Xoogga ayaa ka jawaabay kuna baxay inay ka dulqaadaan.
Previous articleQodobbada Maalintii 2aad looga hadlay Shirka Banbaxa Golaha Wasiirrada JFS.(MUUQAAL)
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo sheegay in guri loo dhisayo Barakacayaasha ku nool Caasimada+(SAWIRRO).